ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် ဟွန်ဒါအင်ဆိုက် များ | ဟွန်ဒါအင်ဆိုက် ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Hybrids/green Cars (172)
Silver Honda Insight Hybrid 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Silver Honda Insight 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Red Honda Insight Hybrid 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Silver Honda Insight 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Lks 277 ညှိနှိုင်း
Black Honda Insight 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Silver Honda Insight Hybrid 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Pearl white Honda Insight 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
White Honda Insight hybrid 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Pearl white Honda Insight 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Blue Honda Insight 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Pearl Gold Honda Insight 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Lks 194 ညှိနှိုင်း
Silver Honda Insight 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Silver Honda Insight Hybrid 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ဘေးကင်းလု...
Black Honda Insight 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ...
Lks 193 ညှိနှိုင်း
White Honda Insight 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Pearl white Honda Insight Hybrid 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Black Honda Insight Hybrid 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Grey Honda Insight 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
မြန်မာပြည် ကဟွန်ဒါ အင်ဆိုဒ်များ
ဟွန်ဒါ အင်ဆိုဒ်ကားတွေဟာ မြန်မာပြည်မှာ ဒီဇိုင်း လှပ ဆန်းသစ်မူကြောင့် နာမည်ကြီးပါတယ်။ ဟွန်ဒါ စီဗစ် ရဲ့ အနောက် လူစီး အများဆုံး ကားအမျိုးအစား တစ်ခု အဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဟိုင်းဘရစ်ကားတွေက ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်တွေနဲ့ လည်ပတ်ကြတာဖြစ်ပြီး သူတို့မှာ ဆီစားပေးမူ စွမ်းရည် အသုံးပြုမူကို လျော့ချပေးနိင်တဲ့ လျှပ်စစ် မော်တာ ပါဝင်ပါတယ်။
ပထမ မျိုးဆက်နဲ့ ဒုတိယ မျိုးဆက် ဆိုပြီး မျိုးဆက် နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ ပထမမျိုးဆက်မှာတော့ တံခါး (၃) ပေါက် ၊ ခရီးသည် နှစ်ယောက်စီး ဟတ်ဘတ် ကိုသာ ထုတ်ပါတယ်။ ဒုတိယမှတော့ တံခါး (၅) ပေါက်၊ ခရီးသည် (၅) ယောက်စီး ဟတ်ဘတ်ကို ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယမျိုးဆက်မှာ၂၀၀၉ ကနေ ၂၀၁၄ ထိ ထုတ်ပါတယ်။ ၂၀၀၉ နှစ်အစမှာ ဒုတိယမျိုးဆက် အင်ဆိုဒ်ကို ဂျပန်နဲ့ အမေရိကမှာ မိတ်ဆက်ခဲ့ရာမှ အသစ်ဈေးနှုန်း ဒေါ်လာ ၂၀,၀၀၀ နီးပါး ရှိခဲ့ပြီး အမေရိကမှာ နောက်ဆုံးထွက် ဈေး အနည်းဆုံး ဟိုင်းဘရစ်ကား တစ်မျိုး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပထမဆုံး ဟိုင်းဘရစ် မော်ဒယ် တစ်ခုအဖြစ် ရောင်းအား အကောင်းဆုံး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
တပတ်ရစ် ဟွန်ဒါ အင်ဆိုဒ်တွေကို ဂျပန် လေလံဆိုဒ်တွေက စိတ်ကြိုက် ရွေးနိင်မဲ့အပြင် တစ်ချို့သော ရိူးရွန်တွေဆီက ရောက်ပြီးသား ဟွန်ဒါ အင်ဆိုဒ်တွေကို မျက်မြင် ရွေးနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ (၅) ယောက်စီး ဖြစ်တဲ့ ဟွန်ဒါအင်ဆိုဒ်တွေကို G ဂရိတ်၊ LS ဂရိတ်၊ L ဂ၇ိတ် စသည့်တို့မှာ ရနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှတော့ အနက်ရောင် နဲ့ အခြား ဆွဲဆောင်မူရှိတဲ့ အရောင်ရှိတဲ့ ဟွန်ဒါ အင်ဆိုဒ်တွေဟာ ဈေးပိုကောင်းပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၂ သိန်း၊ ၅ သိန်း နဲ့ ဈေး အသီးသီး ခေါ်ဆို ရောင်းချနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပုံစံ ဒီဇ်ိုင်းမှာ ဟွန်ဒါ စီဗစ် နဲ့ ပုံစံ တူညီစွာ ဆင်ပြီး ဟွန်ဒါ အင်ဆိုဒ်မှာ ပိုပြီး ကားရှေ့ခေါင်းမှာ စက်ရုပ် ကား ပုံစံနဲ့ ခေတ် ပိုဆန်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အနောက်ပိုင်းတွေမှာ ပုံစံက ဟွန်ဒါ စီဗစ်နဲ့ အနည်းငယ် ကွာသွာပြီး ဟတ်ဘတ်ပုံစံ အနည်းငယ် ပိုပေါက်သွားပါတယ်။ အတွင်းခန်းမှာလည်း ဒီဇိုင်း ခေတ်ဆန်မူ ကို
ကျတော်တို့ ယနေ့တွေ့နေရတဲ့ ဒုတိယ မျိုးဆက်မှာ ၁၃၀၀ စီစီ က အလာများပါတယ်။ ၁၄၀၀ စီစီတွေလည်း တွေ့နိင်ပြီး အင်ဂျင်ကတော့ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီကို ထောက်ကူမူ မော်တော် အင်ဂျင် အကူ မောင်းနှင်မူ စနစ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဂီယာကတော့ အော်တို ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်မှာ မော်တာတွေ တွဲလျက် အလုပ်လုပ်စေရန် ချိတ်ဆက်ထားပြီး မောင်းနှင်နေရာက ဘီးတွေကို အရှိန်လျော့ချလိုက်တဲ့ အခါ လျှပ်စစ်မော်တာဟာ အရှိန်လျော့တဲ့ ဘရိတ်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အတွက် အလဟသ ဖြစ်သွားတဲ့ ပါဝါတွေကို အလကား မဖြစ်စေဘဲ လိုအပ်တဲ့ အချိန်ကို မရောက်ခင်အထိ ဘတ္တရီ ထဲမှာ သိမ်းပေးပါတယ်။ ဒီအတွက် မလိုအပ်ဘဲ လောင်စာများ အလဟသ ဖြစ်စေမူကို လျော့ပေးနိင်တာဟာ ဟိုင်းဘရစ်တွေရဲ့ အားသာချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဟွန်ဒါ အင်ဆိုဒ်ကလည်း အင်ဂျင် ၁၃၀၀ စီစီ နီးပါးလောက်သာ ထုတ်တဲ့ အတွက် ဆီစားက နဂိုကားတွေ ထက် တော်တော် သက်သာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟွန်ဒါ အင်ဆိုဒ်ကားတွေဟာ ဟိုက်ဘရစ်ကားတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အထောက်အကူပြုနေတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဟွန်ဒါ အင်ဆိုဒ်ကားတွေဟာ
၂၀၁၃ ဟွန်ဒါ အင်ဆိုဒ်ကားတွေဟာ အမေရိကန် ကောင်စီက စွမ်းအင်သက်သာစေမှု အတွက် ၂၀၁၃ခုနှစ်ရဲ့ အစိမ်းရောင် ကားများ ဆိုတဲ့ဆုကို ရရှိထားပါတယ်။ ဒီဇိုင်းလှပပြီး လုံခြုံမှုကို ဦးစားပေးထားတဲ့ ကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းကတော့ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကနေ ၁၃၀ ကြားထဲကို ပျဉ်းမျှအားဖြင့် ရှိမှာ ဖြစ်ပြီး မော်ဒယ် နှစ်များ အားဖြင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၊ ၂၀၀၉ခုနှစ်လောက်ကို ရရှိနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းက ကားမှာယူရေး ကုမ္ပဏီ နဲ့ လေလံ ကုမ္ပဏီများကနေ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဂျင်မှာ သင့်လျော်ပြီး ဆီစားသက်သာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းမှုကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို လျော့ချမှုတစ်ခု အနေနဲ့ သာ ဖြစ်စေတဲ့အတွက် နှစ်သက်ပါလျှင် ဂုဏ်ယူစွာ စီးနင်းနိုင်ပြီး ဈေးနှုန်း သက်သာစွာနဲ့လည်း အသုံးပြုနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်စီးကားနဲ့ ဇိမ်ခံကားတွေ အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။